IKenya neGugu Layo Lomhlaba | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Kenya, Yini ongayibona
Afrika kuyizwekazi elihle uma uthanda imvelo nezilwane zasendle. Lapha, elinye lamazwe ahambela kakhulu ngu Kenya ngakho namuhla sizokhuluma ngaleli lizwe elihle kanye nelalo Amagugu Omhlaba.
Yebo, iKenya inamasayithi amaningi amenyezelwe ngale ndlela yi-UNESCO futhi namhlanje sizozibona zonke: the UCiudad Vieja nguLamu, the Ujesu onamandla, the Uhlelo lweChibi laseKenya, yena ILake Turkana National Park, the IMount Kenya National Park futhi i Amahlathi eMijikenda Kaya.
1 ILake Turkana National Park
2 IMount Kenya National Park
3 Amahlathi eMijikenda Kaya
4 Idolobha Elidala Lamu
5 Ujesu onamandla
6 Izinhlelo Zechibi LaseKenya
ILake Turkana National Park
Le paki yaseKenya ifaka ohlwini lwamagugu kusukela ngo-1997. Kusendaweni ekude futhi kwenzelwa abavakashi kuphela. Empeleni ifayili le- ezintathu eziyinkimbinkimbi zepaki bazungeze iLake Turkana, eyaziwa nangokuthi igama lothando, "uLwandle lwaseJade." Ngokusobala, kungenxa yombala okhethekile wamanzi ayo ahamba phakathi kohlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza okotshani.
Noma ngabe yini abayibiza ngokuthi leli chibi elikhulu kunguyebo a uhlobo lolwandle lwangaphakathi nezwe futhi inokukhethekile kokuba yi ichibi elikhulu eligwadule emhlabeni. Umzimba wayo wamanzi ungamakhilomitha angama-250 ubude, mude kakhulu kunogu lolwandle lwaseKenya. Futhi kuyini kulamanzi? Izingwenya! Eziningi, eziningi futhi isikhathi esithile manje inani labantu selikhule ngobuningi nangosayizi wezinhlobonhlobo.
Ngakho-ke, sikhuluma ngokuyisisekelo amapaki amathathu koyedwa. Esokuqala ukuthi ISouth Island National Park. Isiqhingi siphelele embozwe umlotha wentaba-mlilo, ngakho ebusuku ikhipha ukukhanya okuthile. Likhaya lezinyoni eziningi ezinobuthi, amadada nezilwandle nezilwane ezihuquzelayo.
Ngakolunye uhlangothi i- ISibiloi National Park, kwabaningi lapho kuzalwa khona ubuntu ngoba nakhu i- indawo yemivubukulo yeKoobi Fora. Yindawo eyihlane eliwugwadule, ezungezwe izintaba-mlilo, kufaka phakathi i- Intaba iSibiloi, nendawo yokuzalwa yemvubu nengwenya yeNayile.Ameni kuzinsephe, izingwe, amabhubesi, amadube, izimpisi, i-oryx nezingulule.
Futhi ekugcineni kukhona Isiqhingi Esimaphakathi, lapho cizintaba-mlilo nemigodi. Lesi siqhingi sinezintaba-mlilo ezintathu ezinentaba-mlilo engapheli kanye ne-fumaroles kanye… nenqwaba yezingwenya ezinkulu zaseNayile.
IMount Kenya National Park
Iphinde yaba sohlwini lwe-UNESCO kusukela ngo-1997. IMount Kenya iyintaba yesibili ephakeme kunazo zonke ezweni futhi okuzungezile kuhle. Ngabe ama-lagos amanzi acwebile, izinguzunga zeqhwa, iziphethu zamaminerali namahlathi aminyene. Lapha uhlaza olusentabeni nasezintabeni luhlukile futhi kunempilo eningi yezilwane: izindlovu, izingwe, obhejane, izinyathi, izinhlwathi nezinye.
Abahambi bangajabulela lapha ukukhuphuka izintaba, ukukhempa nokuhlola imihume. Phezulu kwentaba kukhona inguzunga yeqhwa eneqhwa elisenkabazwe futhi yize kunzima ukufinyelela khona, esiqongweni esiphansi, iPoint Lenana (amamitha angama-4985), itholakala kalula ngezinsuku ezintathu kuya kwezinhlanu.
Amahlathi eMijikenda Kaya
Ohlwini lwe-UNESCO kusukela ngo-1997, igama UMijikenda ubhekisa eqenjini lamaqembu ayisishiyagalolunye amaBantu ahlala ogwini abavela eKenya: Chony, Duruma, Kaumá, Kambe, Ribe, Rabai, Jibana, Digo naseGiriama.
Ngenkoloni amaqembu ayehlakazeka kodwa i- ama-kayas, lIzindawo zokuqala lapho laba bantu babenza khona imikhosi yokuthwasa, izindawo ezingcwele noma imingcwabo zahlala zibalulekile futhi namuhla zingamasayithi angcwele.
Ngakho, Amahlathi aseKaya aqukethe amasayithi ayishumi asatshalaliswa ngasogwini lapho kusenezinsalela zemizana yabantu bakwaMijikenda.. Namuhla zibhekwa njengezindawo zemilingo zokhokho.
Idolobha Elidala Lamu
Leli sayithi livela ohlwini oludumile lwe- I-UNESCO ngo-2001. Okuhlukanisa idolobha kungokwalo izakhiwo ezisukela ekhulwini le-XNUMX lapho izalwa njengendawo yokuhlala yabantu baseShahaili. Ngemuva kwalokho i- amathonya avela kubavakashi bangaphandle njengabahloli bamazwe abangamaPutukezi, abathengisi baseTurkey noma ama-Arabhu. Ngamunye washiya umaka kodwa uLamu naye wakha isiko lakhe futhi yilona elaphikelela.
Isiza siyathandeka, sinemigwaqo emincane ebonakala imisiwe ngesikhathi, its izikwele eziminyene, izimakethe zayo nenqaba yayo, lapho kwenzeka khona konke. Iwindi lokudlule, lokho. Azikho izimoto esiqhingini futhi zonke zihamba ngezimbongolo. Abantu bahlonipha kakhulu amasiko ngakho-ke, emehlweni entshonalanga, indawo enhle kakhulu.
Le nqaba yafakwa ohlwini lwamaGugu Omhlaba ngo-2001. Usemombasa, ogwini lwaseKenya, futhi kuyinqaba eyayikhona eyakhiwe amaPutukezi phakathi kuka-1593 no-1596. Inhloso yenqaba kwakuwukuvikela ichweba laseMombasa nokuvikela amaPutukezi ayehlala ogwini olusempumalanga.
Ngaleso sikhathi le ndawo "yayifunwa kakhulu" futhi yayingakhululeki ekuhlaselweni ngasekupheleni kwekhulu le-1895, ngokwesibonelo. Kamuva, phakathi nekhulu le-XNUMX leminyaka, le nqaba yasebenza futhi njengendawo yamasosha amasosha amaPutukezi. Ngenkathi iKenya iwela eBrithani ngo-XNUMX, yaba yijele.
Iqiniso ukuthi le nqaba iyindawo enhle futhi igcinwe kahle kakhulu. Uma uthanda izibonelo zokwakhiwa kwezempi leli yisayithi elihle kakhulu. Ngaphakathi uzobona ukukhonjiswa okuhle kwezinto kusuka ngekhulu le-XNUMX kuya kwele-XNUMX, futhi ngaphandle kukhona umbukiso wezinganono. Futhi uma lokho bekunganele, ubusuku obuthathu ngeviki kukhona i- umbukiso okhanyayo nomsindo futhi izivakashi zibingelelwa onogada ngamathoshi.
Okunamandla kubuyela empilweni futhi ekugcineni a isidlo sakusihlwa ngamakhandlela nangaphansi kwezinkanyezi. umbukwane. Kwezokuvakasha kuyanikezwa futhi Hlanganisa isidlo sakusihlwa neMombasa Harbor Sunset Cruise. Kungcono, akunakwenzeka.
Izinhlelo Zechibi LaseKenya
Kukhona amachibi amathathu esewonke, i- Ichibi bogoria, the Ichibi nakuru futhi i Ichibi le-Elementaita, esigodini. Zimunye futhi angamachibi angajulile ahlanganisa indawo ephelele ye Amahektha angama-32.034. Zakha indawo enhle yokwazisa ngemvelo.
Bobathathu banjalo amachibi ane-alikhali, ngayinye inenqubo yayo yokwakheka komhlaba, ene amagiza, iziphethu ezishisayo, amanzi avulekile, amaxhaphozi, amahlathi nezindawo ezivulekile zotshani. Amachibi amathathu aqukethe Izinyoni eziningi eza futhi zihambe ngamanani amakhulu njengengxenye yenqubo yokufuduka ngokuya ngokushintsha kwezinkathi zonyaka.
Hay amalangabi osebeni lwamachibi, kushiya umthunzi opinki ongalibaleki. Amanzi ane-alikhali avumela impilo yama-algae nama-crustaceans amancane, ngokunembile ukudla kwama-flamingo. ELake Nakuru kwesinye isikhathi bavela ukhalo olumhlophe abeza ukuzodla izinhlanzi futhi kukhona futhi obhejane, amabhubesi, izinyathi zezingwe ...
ELake Bogoria kunamagiza neziphethu ezishisayo ezinokuqukethwe okuphezulu kwe-carbon dioxide namabhamuza aqhumayo. Umsebenzi wentaba-mlilo, njengoba sibona, kwesinye isikhathi ungumculi ohamba phambili emhlabeni. Futhi ekugcineni, eLake Elementaita uzobona izinhlobo ezijwayelekile ezifana nezinkawu, izimpisi, izimpungushe, izindlulamithi nezinkozi. Ipharadesi langempela labo abathanda ukubuka izinyoni.
Ngakho-ke, noma ngubani oza emachibini uzojabulela, aphile, okuhlangenwe nakho okungakholeki ... Yebo, njengoba sibona, noma ngubani onquma ukuya eKenya uzoba nesikhathi esihle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Afrika » Kenya » IKenya neGugu Layo Lomhlaba
Ungazithola kanjani izikebhe ezishibhile